Zvemukati Raibhurari: Chii Icho? Uye Nei Yako Yemukati Yekutengesa Sarudzo Iri Kukundikana Pasina Iyo | Martech Zone
Makore apfuura taive tichishanda nekambani yaive nemamiriyoni akati wandei ezvinyorwa zvakaburitswa pane yavo saiti. Dambudziko raive rekuti mashoma kwazvo ezvinyorwa akaverengwa, kunyangwe mashoma akaiswa muzvinjini zvekutsvaga, uye isingasvike muzana muzana yadzo yaive nemari yakatorwa kwavari.
Ndingakupikise kuti uongorore raibhurari yako yezvinyorwa. Ini ndinotenda iwe unogona kushamisika kuti ndeapi muzana emapeji ako ari anozivikanwa uye anobatanidzwa nevateereri vako, tisingataure kuti ndeapi mapeji anoverengeka mune injini dzekutsvaga. Isu tinowanzoona kuti vatengi vedu vatsva vanoverengerwa pamabranded term chete, uye tashandisa zviuru zvemaawa pane zvemukati zvisina anoverengwa nemunhu.
Uyu mutengi aive nevashanduri vakazara nevapepeti nevanyori… asi ivo havana zano repakati chii kunyora. Ivo vakangonyora nezvezvinyorwa ivo pachavo zvavakawana zvinonakidza. Takatsvaga zvirimo tikatsvaga zvinhu zvinonetsa… takawana zvinyorwa zvakawanda kubva muzvinyorwa zvakasiyana pane iwo musoro mumwe chete. Ipapo isu takawana toni yezvinyorwa izvo zvisina kuverengerwa, zvakange zvisina chekuita, uye zvakange zvisina kunyorwa kunyorwa. Ivo vaitove nezvakaoma zvishoma sei-kuti zvinyorwa zvisina kana mapikicha zvaisanganisira.
Hatina kurumbidza mhinduro pakarepo. Isu takavabvunza kana isu tichigona kuita chirongwa chekuchaira kwataishandisa 20% yezvivakwa zveimba yavo yenhau mukuvandudza nekubatanidza zviripo pane kunyora zvinyorwa zvitsva.
Chinangwa chaive chekutsanangura a raibhurari yezvinyorwa - uyezve wova nechinyorwa chimwe chakazara uye chakazara pachinyorwa choga choga. Yakanga iri kambani yenyika, saka takaongorora musoro wenyaya uyu zvichibva pavateereri, masosi avo ekutsvaga, mwaka, nzvimbo, uye vakwikwidzi vavo. Isu takapa yakatsanangurwa runyorwa rwezviri mukati, zvakarongwa pamwedzi, izvo zvakaiswa pamberi pakutsvaga kwedu.
Yakashanda sedumwa. Iyo 20% yezve zviwanikwa isu zvatakashandisa kuvaka yakazara yezvinyorwa raibhurari inopfuura iyo 80% yezvimwe zvemukati zvakagadzirwa zvisina tsarukano.
Dhipatimendi remukati rakachinja kubva ku:
Zvakawanda sei zvemukati zvatiri kuzogadzira vhiki rega rega kuti tiwane zvibereko zvibodzwa?
Uye yakachinjirwa ku:
Ndezvipi zvirimo zvatinofanira kukwidziridza uye kusanganisa zvinotevera kuti tiwedzere kudzoka pane zvemukati kudyara?
Zvaive zvisiri nyore. Isu takatovaka hombe dhizaini yekuongorora injini kuti itarise yakatemerwa kurongeka kweyemukati kugadzirwa kuona kuti tanga tichiwana yakanakisa ROI pane zvemukati zviwanikwa. Peji rega rega rakarongedzwa nezwi rakakosha, mazwi akakosha akaiswa, jogirafi (kana yakanangwa), uye taxonomy. Isu takazoona zvemukati zvakatarwa pamakwikwi - asi hazvina kuenzana zvakanaka.
Sezvineiwo zvakakwana, vanyori uye vapepeti vaiidawo. Ivo vakapihwa nemusoro wenyaya, zviripo zvirimo izvo zvinofanirwa kuendeswazve kuchinyorwa chitsva chakazara, pamwe nezvakakwikwidza zvemukati kubva padhuze newebhu. Izvo zvakavapa iwo ese kutsvagurudza kwavanoda kuti vanyore iri nani iri nani, yakadzama nyaya inobata.
Nei Uchifanira Kuvaka Iyo Yemukati Raibhurari
Heino ipfupi sumo vhidhiyo pane izvo zvirimo raibhurari uye nei yako yemukati yekushambadzira zano inofanirwa kusanganisira iyi nzira
Makambani mazhinji anotora zvinyorwa zvemisoro yakafanana nekufamba kwenguva, asi mushanyi kune yako saiti haasi kuzobaya nekufamba kuti awane ruzivo rwavanoda. Zvakakosha kuti iwe ubatanidze idzi misoro kuita imwechete, yakazara, uye yakarongeka tenzi chinyorwa pamusoro wega wega wepakati.
Maitiro Ekutsanangura Yako Yemukati Raibhurari
Kune chako chigadzirwa kana sevhisi, yako yemukati zano inofanirwa kuita pane yega nhanho yeiyo rwendo rwevatengi:
Dambudziko Kuzivikanwa - kubatsira mutengi kana bhizinesi kuti anzwisise dambudziko ravo zvirinani pamwe nekurwadziwa kuri kukonzera iwe, veimba yako, kana bhizinesi rako.
Solution Kuongorora - kubatsira mutengi kana bhizinesi kunzwisisa kuti dambudziko rinogona kugadziriswa sei. Kubva pane 'sei-ku' vhidhiyo kuburikidza nezvigadzirwa kana masevhisi.
Zvinodiwa Kuvaka - kubatsira mutengi kana bhizinesi kuti vanzwisise maitiro ekunyatsoongorora mhinduro imwe neimwe kuti vanzwisise zvakavanakira. Ichi chikamu chikuru kwaunosvika pakuratidza kusiyana kwako.
Mutengesi Sarudzo - kubatsira mutengi kana bhizinesi kuti vanzwisise kuti sei vachifanira kusarudza iwe, bhizinesi rako, kana chigadzirwa chako. Apa ndipo paunoda kugovana hunyanzvi hwako, zvitupa, wechitatu-bato kuzivikanwa, humbowo hwevatengi, nezvimwe.
Kune mabhizinesi, iwe ungangodawo kubatsira iye munhu ari kutsvagisisa kuti anzwisise sei wega wega wemakwikwi ako nekukuisa pamberi peboka ravo kuti vagadzire kubvumirana.
Zvikamu izvo zvakagadzirwa mushe uye zviri nyore kutenderera kubva pane iwo musoro wepasi kuenda kumusoro.
tsvakurudzo kubva kunzvimbo dzekutanga uye dzechipiri kupa kuvimbika kune zvako zvemukati.
Bulleted zvinyorwa pamwe nemapoinzi akakosha enyaya akatsanangurwa zvakajeka.
Mifananidzo. Mumiriri thumbnail yekugovana, madhayagiramu, uye mapikicha pese pazvinogoneka mukati mechinyorwa ichi kuti unyatsoitsanangura uye kuvaka kunzwisisa. Micrographics uye infographics zvaitove nani.
Vhidhiyo uye Audio kupa pfupiso kana tsananguro pfupi yezvirimo.
Mukushanda nemutengi wedu, a kuverenga izwi yakanga isiri iyo vavariro yekupedzisira, zvinyorwa izvi zvakabva pamazana mashoma kusvika kuzviuru zvemashoko. Zvekare, zvipfupi, zvisingaverengeke zvinyorwa zvakadonhedzwa uye ndokuendeswa kune izvo zvitsva, zvakapfuma zvinyorwa.
Backlinko yakaongorora pamusoro pemamirioni 1 mhedzisiro uye ikawana avhareji # 1 peji rembwa yaive nemazwi 1,890
Iyi dhata yakatsigira kwedu kwepamberi uye zvatakawana. Izvo zvakanyatso shandurwa matarisiro atinoita pakuvaka zvemukati marongero evatengi vedu. Hatichisiri kuita boka rekutsvagisa uye huwandu hwekugadzira zvinyorwa, infographics uye whitepapers zvekare. Isu tinogadzira nemaune a raibhurari kune vatengi vedu, kuongorora avo azvino zvemukati, uye nekuisa pekutanga nzvimbo dzakakosha.
Kunyangwe Martech Zone, tiri kuita izvi. Ini ndaimbozvirova dundundu nezvekuva nezvipfuura zviuru gumi. Unoziva chii? Takatema bhurogu kusvika kungangoita zviuru zvishanu zvemaposi uye tichienderera tichidzoka vhiki rega-rega uye kunatsiridza zvinyorwa zvekare. Nekuti ivo vanoshandurwa zvakanyanya, tinozvinyorazve se itsva. Pamusoro pezvo, nekuti kazhinji vanowanzoverengerwa uye vane backlinks kwavari, ivo vanokwira kumusoro mumiginjini yekutsvaga.
Kutanga Nezvako Zvemukati Raibhurari Isu
Kuti utange, ndinokurudzira kutora nzira iyi:
Ndeapi tarisiro nevatengi vanotsvagisa online nezve nhanho imwe neimwe murwendo rwemutengi izvo zvinogona kuvatungamira iwe kana vako vaunokwikwidza?
chii midzimu iwe unofanirwa kuisa? Zvinyorwa, mifananidzo, mapepa ekushandira, mapepa machena, nyaya dzenyaya, zvipupuriro, mavhidhiyo, podcast, nezvimwe.
chii mafambiro zvemukati zvaunazvo pane yako saiti?
chii tsvakurudzo iwe unogona here kuisa muchinyorwa kuti usimbise uye kugadzirisa zvemukati zvirimo?
Padanho rega rega uye nenyaya yega yega, chii chinotsvaga injini yekutsvaga competitorszvinyorwa zvinoita senge? Ungagadzira sei zvirinani?
Kunyora nezve iwer kambani vhiki rega rega haisi kuzoshanda. Iwe unofanirwa kunyora nezve yako tarisiro uye vatengi. Vashanyi havadi kuva akatengeswa; ivo vanoda kutsvaga uye kuwana rubatsiro. Kana ndiri kutengesa chikuva chekushambadzira, hazvingori nezve zvatingaite kana izvo vatengi vedu zvavari kuita vachishandisa software. Ndiwo mashandisiro andakaita basa remutengi wangu uye bhizinesi ravakashandira.
Kubatsira vatengi vako uye tarisiro ndizvo zvinoita kuti vateereri vako vazive hunyanzvi uye chiremera muindastiri. Uye izvo zvirimo zvinogona kunge zvisina kuganhurirwa kune izvo zvigadzirwa zvako nemasevhisi anobatsira vatengi vako. Iwe unogona kunyange izvo zvekusanganisira zvinyorwa pamutemo, basa, kusangana, uye chero chero imwe nyaya iyo yako tarisiro yauri kurwisana nayo kubasa.
Maitiro Ekutsvagisa Yako Yemukati Raibhurari Misoro
Ini ndinogara ndichitanga nematatu ekutsvagisa zviwanikwa zvemukati zvandinogadzira.
Kutsvaga kwehupenyu kubva Semrush kuziva misoro yakatsvakirwa zvakanyanya uye zvinyorwa zvine chekuita netarisiro yandinoshuvira kukwezva. Chengeta runyorwa rwezvinyorwa zvepamusoro zvinobatsira, zvakare! Iwe uchazoda kuenzanisa chinyorwa chako kuti uve nechokwadi chekuti uri nani kupfuura ivo.
Zvemagariro zvakagovana tsvagiridzo kubva kuBuzzSumo. BuzzSumo inoteedzera kuti kangani zvinyorwa zvakagovaniswa. Kana iwe uchikwanisa kuyambuka mukurumbira, kugoverana, uye kunyora chinyorwa chakanakisa pamusoro wenyaya - mikana yako yekuburitsa kubatanidzwa nemari inowanikwa zvakanyanya. BuzzSumo yakanyora chinyorwa chikuru nguva pfupi yadarika kuti ungashandise sei icho Zvemukati Ongororo.
Kuenderana taxonomy kuongorora kuona kuti chinyorwa chako chinofukidza zvese zvidiki zvine chekuita nemusoro wenyaya. Buda Pindura Vanhu Vose kune kumwe kutsva kunoshamisa nezve taxonomy yemisoro.
Gadzira rakakura runyorwa rwemisoro iyi, woisa pamberi nekukosha, uye tanga kutsvaga yako saiti. Iwe une zvemukati zvinobata pamusoro iwoyo musoro? Iwe une zvemukati zvinokwana zvine hukama nemazwi akakosha? Kana ichigona kuvandudzwa - nyorazve zvakapfuma, zvimwe zvizere zvinyorwa. Wobva wagadzirisa zvemukati zvinobatsira ako tarisiro uye vatengi zvinotevera.
Gadzira yako yemukati khalendari nezvakakosha. Ini ndaikurudzira kupatsanura nguva pakati pekuvandudza zvekare nekunyora nyowani kudzamara raibhurari yako yapera. Uye nekuda kwekuchinja nharaunda dzebhizinesi, kufambira mberi kwetekinoroji, uye makwikwi - kunogara kune misoro mitsva yekuwedzera kuraibhurari yako.
Sezvo iwe paunobatanidza zvinyorwa zvekare kuita zvitsva, zvakanyatso nyatso zvinyorwa, ive shuwa kutsiva izvo zvekare zvinyorwa nekurongedza zvakare. Ini ndinowanzo tsvagurudza kuti chinyorwa chega chega chinomisikidzwa sei uyezve ndoshandisa yakanakisa chinzvimbo chinzvimbo permalink yechinyorwa chitsva. Pandinoita izvi, injini dzekutsvaga dzinowanzo dzoka uye dzinozviisa pamusoro zvakanyanya. Zvino, kana zvazove zvakakurumbira, zvinokwira mudenga zvine chinzvimbo.
Yako Yemukati Chiitiko
Funga nezvechinyorwa chako kunge mutyairi wendege anga achiuya kuzomhara. Mutyairi wendege haatarisise pasi… anotanga kutsvaga mamaki, achidzika, otarisa zvakanyanya kusvika ndege yadzika.
Vanhu havatangotanga kuverenga chinyorwa izwi neshoko, ivo Shandisa scan it. Iwe uchazoda kushandisa misoro, kushinga, kusimbisa, block makotesheni, mifananidzo, uye bullet mapoinzi zvinobudirira. Izvi zvinoita kuti vaverengi vatarise maziso vozotarisa. Kana chiri chinyorwa chakareba chaizvo, ungangoda kutanga nacho netafura yezviri mukati maari anchor tag uko mushandisi anogona kubaya uye kusvetukira kuchikamu chinovafadza.
Kana iwe uchida kuve neyakanakisa raibhurari, ako mapeji anofanirwa kuve anoshamisa. Chinyorwa chimwe nechimwe chinofanirwa kuve nemasvikiro ese anodikanwa kuti akanganisa mushanyi uye avape ruzivo rwavanoda. Inofanirwa kuve yakarongeka, hunyanzvi, uye iine yakasarudzika mushandisi ruzivo mukuenzanisa nevako vanokwikwidza:
Usakanganwa Kudana kwako kuti Uite
Zvemukati hazvibatsiri kunze kwekunge iwe uchida kuti mumwe munhu atore matanho pazviri! Ive neshuwa yekurega vaverengi vako vazive zvinotevera, ndezvipi zviitiko zvauri kuuya, kuti vangaronga sei musangano, nezvimwe.
Tags: backlinkoraibhurari yezvinyorwaContent Marketingcontent marketing strategykugadzirwa kwemukatichinzvimbo chegooglemangani mazwi anofanirwa kuve blog blograibhuraritsvakurudzosemrushshoko count